स्वदेश र विदेश जहाँ पढ्न चाहे पनि शैक्षिक लोन दिन्छौँ – Akhabar Post : Daily Online News From Nepal
स्वदेश र विदेश जहाँ पढ्न चाहे पनि शैक्षिक लोन दिन्छौँ
लक्ष्मण चालिसे, प्रमुख, लोन विभाग, एन आइ सी एसिया बैँक
एनआइसी एसिया बैँकले शैक्षिक कर्जाको व्यवस्था गरेको छ ।
प्लस टुभन्दा माथिको जुनसुकै विषय नेपालमै पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई लोन दिन सक्छौँ ।
अष्ट्रेलियालाई लक्षित गरेर एनआइसी एसिया एजुकेशन लोन लन्च गरेका छौँ ।
देशभर शाखा खोल्ने पाटोमा सबैभन्दा धेरै शाखा हाम्रो बैँकले खोल्दैछ ।
वास्तवमा बैँकिङ क्षेत्र राम्रो रोजगारीको अवसर भएको क्षेत्र हो ।
बैँकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पाठ्यक्रमले समेट्न सकेको छैन ।
एनआइसी एसिया बैँकले शिक्षा क्षेत्रमा के कस्ता कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ?
एनआइसी एसिया बैँकले शैक्षिक कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । पहिला हामीले नेपाली विद्यार्थीलाई मात्र लक्षित गरी सामान्य कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले अष्ट्रेलियाले सबै कमर्सियल बैँकहरुलाई शैक्षिक लोनका लागि खुला गरेपछि अष्ट्रेलियालाई लक्षित गरेर एनआइसी एसिया एजुकेशन लोन भनेर लन्च गरेका छौँ । जुलाईदेखि यो लोन सुरु गरेका हौँ । अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीका लागि सहज रुपमा लोन उपलब्ध गराउँछौँ । यो लोन अहिले कमर्सियल बैँकहरुले दिइरहेको एजुकेशन लोनभन्दा पृथक छ ।
अरु देशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि कुनै व्यवस्था छैन ?
सबै देशका लागि छ । तर अष्ट्रेलियाको छुट्टै प्रोडक्ट छ । जापान, अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि पनि लोनको व्यवस्था छ ।
विदेशमा पढ्न जानेले ऋण लिन चाहने हो भने कुनकुन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिला त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ । त्यसपछि विदेशी शिक्षण संस्थामा भर्ना भएको कागजपत्र चाहिन्छ । आम्दानीको स्रोत सबै खुलाउनुपर्छ । त्यसपछि धितोको मूल्याङ्क गर्छौँ । धितोका लागि लालपुर्जा र नागरिकता त अनिवार्य भैहाल्यो । विद्यार्थीले सबै कागजपत्र पूरा गरेको ५ कार्यदिनभित्र लोन स्विकृत हुन्छ ।
स्वदेशमै पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई कस्तो कर्जाको व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
नेपालमै पढ्ने विद्यार्थीका लागि पनि शैक्षिक कर्जा दिइरहेका छौँ । प्लस टुभन्दा माथिको जुनसुकै विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई लोन दिन सक्छौँ । विद्यार्थीको उमेर १८ वषै नाघेको हुनुपर्छ भने कम्तिमा ५ लाख र बढिमा १० लाख रुपैयासम्म ऋण दिन सक्छौँ । ऋण लिनका लागि आम्दानी र धितो आवश्यक पर्छ । ऋण लिएर पढ्न लागेको कोर्ष ५ वर्षको छ भने ६ वर्षसम्म ब्याज मात्रै तिरे हुन्छ । ६ वर्ष पूरा भएपछि चाँही किस्ता पनि तिर्नुपर्छ ।
यस बैँकले ऋणबाहेक शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अरु केही काम गरेको छ ?
प्रत्यक्ष रुपमा त लोन सेवा नै हो । अप्रत्यक्ष रुपमा चाहीँ कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीमार्फत पनि केही कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । यो अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेका छौँ । वित्तिय साक्षरता अभियानमा पनि लगानी गरेका छौँ ।
बैँकका अरु विशेषता र कार्यक्रम केके छन् ?
देशभर शाखा खोल्ने पाटोमा सबैभन्दा धेरै शाखा हाम्रो बैँकले खोल्दैछ । यो वर्ष निजी बैँकहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै शाखा खोल्नेको सुचिमा हामी दोस्रो नम्बरमा छौँ । अर्कोवर्षभित्र हाम्रो शाखा सबैभन्दा धेरै हुन्छ । हामीले मुगु, कालिकोट जस्ता दुर्गम जिल्लामासमेत शाखा खोलेका छौँ । ति शाखाबाट पनि विद्यार्थीलाई लोन दिएका छौँ ।
धितो राख्न नसक्ने विद्यार्थीले अरु कुनै उपायबाट ऋण लिन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
अहिलेसम्म बिना धितो ऋणको व्यवस्था गरिएको छैन । तर शैक्षिक योग्यता राम्रो भएका र भविष्यमा पढेर राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छन् भन्ने विद्यार्थीलाई बिना धितो पनि ऋण दिन सकिन्छ कि भनेर सोच बनाएका छौँ ।
नेपालको सन्दर्भमा बैँकिङ क्षेत्रमा लाग्नेहरुको करियर कस्तो पाउनुभएको छ ?
पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा बैँकिङ क्षेत्रले धेरै उन्नति गरेको छ । न्युनतम डिप्लोमा पास भएका र मास्टर्स गर्न सक्नेको बैँकिङ क्षेत्रमा राम्रो करियर छ । वास्तवमा बैँकिङ क्षेत्र राम्रो रोजगारीको अवसर भएको क्षेत्र हो ।
एउटा राम्रो बैँकर बन्नका लागि विद्यार्थीका हुनुपर्ने गुणहरु केके हुन सक्छन् ?
बैँकर भनेको कामको क्षमता र अनुभवको आधारमा हुँदै जाने हो । तर आधारभूत रुपमा विद्यार्थीमा लगनशीलता हुनुप¥यो । अनुशासन र पढाईप्रति प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ । यसले विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर उकास्नमा धेरै मद्दत गर्छ । शैक्षिक स्तर उकासिएपछि जुनसुकै प्रतिस्पर्धामा पनि सफल हुन सक्छ । आर्थिक क्रियाकलाप र वित्तसम्बन्धी ज्ञान पनि लिनुपर्छ ।
बैँकिङ क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव छ कि छैन ?
पढेका मान्छे बेरोजगार पनि छन् । हामीले चाहेजस्तो दक्ष जनशक्ति अझै पाउन सकिएको छैन । बजारमा जनशक्ति छन्, तर बैँकले खोजेजस्तो पाउन गाह्रो छ ।
बैँकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित पढाईका लागि पाठ्यक्रम पर्याप्त छ ?
बैँकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पाठ्यक्रमले समेट्न सकेको छैन । प्रयोगात्मक शिक्षाको पनि अभाव देखिएको छ ।
बैँकहरुको तर्फबाट शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउन सकिदैन ?
सबै बैँङ्करहरु मिलेर नेशनल बैँङ्कर ट्रेनिङ इन्स्टिच्यूट खोलेका छौँ । यसले अब छिटै विविए कोर्ष गराउने तयारी गरेको छ । एनआइसी एसिया बैँकले आफ्ना कर्मचाीका लागि लर्निङ एण्ड डेभलपमेन्ट खोलेका छौँ ।
तिहारमा देउसी भैलो खेल्ने चलन यसरी सुरु भयो